Bisadda British Shorthair | Bisadaha Noti
Bisadda British Shorthair
Bisadda British Shorthair Waa nooc caan ah oo caan ah: aad u kalgacal badan, ciyaar leh, caqli badan, oo waliba ku raaxeysta caafimaad aad u fiican. Muuqaalka uu haysto waa mid cajaa’ib leh, waana inuu leeyahay indho waawayn oo awood u leh inuu qalbigaaga u jilciyaa adoo fiirinaya oo keliya.
Haddii aad raadineyso bisad guri si aad waqtiyo badan oo aad u qurux badan ula qaadatid, British Shorthair ayaa laga yaabaa inuu noqdo wehelka aad raadineyso.
1 Asalka iyo taariikhda bisadda Shorthair ee Ingiriiska
2.1 British Shorthair Buluug ah
3 Dabeecadaadu waa sidee
4 Daryeelka Gaaban ee Ingiriiska
6 Immisa ayey ku kacaysaa Shorthair British ah?
6.1 Ma ka heli kartaa bisadaha British Shorthair ee korsashada ah?
7 Sawirro bisad Shorthair British ah
Asalka iyo taariikhda bisadda Shorthair ee Ingiriiska
Halyeeygeena asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa Boqortooyada Ingiriiska, sida magaciisa ka muuqata; Si kastaba ha noqotee, bisadaha guryaha ee Rome waa awoowayaashood. Waa noocii ugu da'da yaraa ee Ingiriisiga la yaqaan, mid ka mid ah kuwa kiciya xushmadda iyo xushmadda ugu weyn ee kuweenna jecel bisadaha. Waagii hore waxaa loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka jiirka ah, laakiin waxay durba heshay kalsoonida aadanaha, maadaama ay noqotay mid aad daacad ugu ah iyaga.
Wali, ilaa qarnigii XNUMXaad ayay ahayd markii taranka xulashada uu bilaabmay. Sanadkii 1871, British Harrison Weir, wuxuu sameeyay daraasad ku saabsan taranka oo ku saleysan bisadaha markii ugu horreysay lagu soo bandhigay The Crystal Palace ee London. Bandhig uu ku kasbaday taageerayaal badan. Halkaas ayay ku magacowday British Shorthair si aan loogu khaldin bisadda bariga ama Angora.
Intii lagu guda jiray labadii dagaal adduun, tarankaasi wuxuu qarka u saarnaa inuu baaba'o, sidaa darteed si loo badbaadiyo waxay u baahdeen inay maciinsadaan kuwa kale, sida bisadda Beershiya., inaad isku daydo inaad dib u hesho. Iskutallaabooyinkani waxay keeneen bisad leh madax wareegsan, lugaha adag iyo midabka indhaha oo aad u daran, marka lagu daro timaha dheer ee Beershiya. Waxay qaadatay sanado badan oo taranka xulashada ah si loo baabi'iyo astaamahan ugu dambeeyay, kala soocida bisadaha Britain ee gaagaaban iyo kuwa dhaadheer.
Eygan afarta lugood leh ee dhogorta leh, culeyskiisuna yahay 6 illaa 8 kg, waa xayawaan lagu garto inuu leeyahay madax weyn iyo dhego wareegsan. Qaybaha dambe si ballaaran ayaa loo kala soocay, waxayna leeyihiin qaab saddexagal ah. Indhuhu waa waaweyn yihiin, oo midabkoodu aad u daran yahay.
Jidhkiisu waa xoog badan yahay, oo lagu ilaaliyo jaakad gaaban, cufan oo jilicsan oo midab kasta yeelan karta (caddaan, madow, buluug, guduud, midab leh, shukulaato, lacag, dahab, lilac, qorfe, fawn, bicolor). In kasta oo noocyadu dhammaantood qurux yihiin, haddana British Shorthair buluug iyo British Shorthair white waa laba ka mid ah kuwa ugu caansan. Mana ahan wax ka yar: muuqaalkiisa, durbaba qallafsan, waa mid cajiib ah. Hadaadan i rumaysanayn, aan waxbadan ka baranno iyaga:
British Shorthair Buluug ah
Bisadda buluugga ah ee shorthair buluug ah waxay leedahay astaamo u gaar ah oo leh indho qurux badan, midab liin dhanaan ah, oo siinaya muuqaal aad u macaan oo jilicsan
Sawirka - Bisadaha Bisadaha Encyclopedia
Bisadda cad ee British shorthair xitaa way ka sii yaab badan tahay haddii ay suurogal tahay, maadaama ay yeelan karto indho liin ama buluug ah, ama midab kasta, oo leh timo cad, muuqaalkeedu wuxuu soo jiitaa dareen badan.
Dabeecadaadu waa sidee
Dabeecada bisadan qaaliga ah waa mid cajiib ah. Isagu waa kalgacal, ciyaar badan, faraxsan. Wuxuu jecel yahay inuu la joogo qoyska, iyadoon loo eegin da'da xubnaheeda, wuxuuna u janjeera inuu si wanaagsan ula noolaado xayawaanka kale (bisadaha iyo eeyaha) sidoo kale.
Waxa kaliya ee "taban" ee aan dhihi karnaa waa taas wuu kaga badan yahay bisadaha kale. Ma jecla inuu keligiis waqti la qaato, runtiina, waxay u badan tahay inuu ku dhammaan doono oo uu guriga oo dhan naga daba joogo oo aanu doonaynin in muddo nala kala maqnaado. Inta soo hartay, waa bisad ku habboon guri ama guri, maadaama ay si fiican ula qabsaneyso ilaa iyo inta waqtiga loogu talagalay.
Daryeelka Gaaban ee Ingiriiska
Bisadda British shorthair, sida bisadaha oo dhan, waxay u baahan tahay biyo nadiif ah oo nadiif ah, cunto tayo leh (aan lahayn badar ama wax soo saar), iyo cadayasho maalinle ah si looga fogaado samaysanka waxa laga baqo kubadaha timaha. Laakiin intaas kaliya maahan, laakiin waqti ka waqti waa inaan u qaadnaa dhakhtarka xoolaha, ama in la dhigo tallaalada lagama maarmaanka ah, ee tufid iyo markasta oo aan ka shakinno inuu jiran yahay.
Inkasta oo tani aysan ku filnayn. Sidii aan horay u soo sheegnay, aad ayey muhiim u tahay in waqti la qaato, la ciyaar, daawashada telefishanka, iwm. Aad ayuu u firfircoon yahay wuxuuna u baahan yahay inuu dhaqaaqo, jimicsi sameeyo. Sababtaas awgeed, si aad u faraxsanaato oo aad u fiicnaato, waa inaad u hibeysaa saddex ama afar kalfadhi oo gaaban maalintii, oo soconaya qiyaastii 5 daqiiqo midkiiba. Dukaamada xayawaanka waxaan ka heli doonaa tiro aan la tirin karin Alaabta carruurtu ku ciyaaraan kaas oo aan la qaadan doonno waqti fiican.
In kasta oo ay tahay nooc guud ahaan aad u caafimaad qaba, waxay yeelan kartaa cuduradan:
Feline coronavirus: Waxaa lagu kala qaadaa fayraska loo yaqaan 'corona virus' kaas oo inta badan weerara unugyada mindhicirka bisada, taasoo keenta infekshanka caloosha ee fudud ama daba dheeraada
Hypertrophic cardiomyopathy: waa cudur ku dhaca hiddo-wadaha. Waxay keentaa isku-dheellitirnaanta cufnaanta myocardial ee marinka bidix, taasoo keenta cilladaha habka wareegga dhiigga.
Cudurka kelyaha ee polycystic: waxaa lagu gartaa jiritaanka finanka kilyaha oo isku cadaadiya unugyada kana celiya inay kilyaha si sax ah u shaqeyso. Haddii bisadu leedahay cudurkan, waxay yeelan doontaa calaamado ay ka mid yihiin cunno yari iyo culeys, matag, taxaddar la'aan, iyo isticmaalka biyaha oo kordha (taas oo ka dhigaysa inay kaadi badan yeelato).
Immisa ayey ku kacaysaa Shorthair British ah?
Haddii aad go'aansatay inaad hesho eey ka mid ah noocyadan quruxda badan, waa inaad maanka ku haysaa in qiimaha uu ku saabsan yahay 500 euros.
Ma ka heli kartaa bisadaha British Shorthair ee korsashada ah?
Way adagtahay. Ahaanshaha nooc daahir ah, iyo sidoo kale wax la jeclaan karo, waa caadi in aysan jirin korsasho. Laakiin taasi macnaheedu maaha in aan la heli karin. Xaqiiqdii, haddii aad runti rabto inaad la noolaato bisad noocaan ah, waxaan kugula talineynaa inaad booqato ama aad laxariirto ururada iyo xarumaha xayawaanaadka, iyo waliba xeryaha aagaaga.
Sawirro bisad Shorthair British ah
Halkan waxaan ku soo lifaaqeynaa qaar:
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisadda British Shorthair
Qiimaha qolka culus wuxuu ka sarreeyaa € 500, laakiin tayadu shaqo kuma laha waxa lagu iibsaday qiimahaas ama ka hooseeya. Way i khiyaaneeyeen oo bisad ayay ku iibiyeen € 450, aakhirkiina Ingiriis ma ahayn (bisad cawl bay ahayd), way xanuunsanayd, abtirsiinyo maleh ... waxay ahayd in cisbitaal la dhigo ugu dambayntiina wuu dhintay, waxaan waqti aad u xun. Ugu dambeyntiina waxaan u jeesanay qaboojiyaha ASFE wax walbana way fiicnaayeen, bisad qurux badan oo caafimaad qabta.
Xageen ka heli karaa bisad ingiriis ah oo buluug ah mahadsanid
Ka jawaab José Antonio Campos González
Salaan José Antonio.
Waxaan kugula talineynaa inaad weydiiso rugta caafimaadka xoolaha. Waxaa laga yaabaa inay ku caawin karaan.
Coronavirus iyo bisadaha: ma kuu gudbin karaan cudurka?
Isku laab Scottish, bisadda oo leh indho macaan